600 Daawo:Gabay uu Tiriyay Shalay Intaan La Toogan Farxaan Yare, | khaatumo news online
Daawo:Gabay uu Tiriyay Shalay Intaan La Toogan Farxaan Yare,
Jan 16, 2020 - 8 Aragtiyood
Marxuun Farxaan Maxamed Xasan yare oo shalay maamulka Somaliland ku toogtay Jeelka Mandheera ayaa gabay laga duubay ka hor inta aan la taagin Tiirka Qisaasta.
Gabayka Farxaan ayaa ku Socda Beesha Uu ka soo jeedo Isagoo ku tilmaamaya in uu yahay nin Tol-wayay.
Ma idinla habboontahay in aad muuqaalkan meesha ka saartaan.
Ninkani wuu xijaabtay hadduu wax dlay iyo haddii kaleba, qof uu ALLE dilayana tol iyo qaraabo ma bedbaadin karaan. Midda kale, qofkii qof dila waa in LA QISAASAA saasaana NOLOSHU ku jidhaa.
Haddii qofkii qof dilaba uu facebook soo galo oo uu yiraahdo halla ii gurmado, waxa ay taasi dhiirigalinaysaa in dilku uu sii bato. Yaan marka lagu degdegin daadinta qof aan xaq loogu lahayn, haddii kale u diyaar garaw cawaaqibkeeda.
War Wiilkaa marxuumka sawirkiisa meesha ka saara sagaal sano xidhnaa maamul ka somaliland u xidhnaa oo dil loo haystay adeerkii ina qambi hargeysa joogay oo ilaa wasiir ka gaadhay hadii wax loo qabanayo somalida qofku markuu dhinto tol iyo xigaal yeeshaa
ilaahoow u naxariiso ilaahoow kuwa aad albaabadda janada ufurto ku dar. inta kalena ilaahow u naxariiso
Gabaygan Waa soogudbay
Tankale Sland Wakhtigeedii Wuu
Dhacay XaQiiQ Hada Maamulku
Wuxu usamaysanyahay Qaab Qabiiil
Waanu iidiin Sheegnay
Tankale Ciidanka Jooga Sool
Sidii aan Xabadi uga baxdeen ayaan
Kujiraaa hawshiisa xilikasta hagaadhee
Ciidankaasi Waa Qaniiimad Wakbtigoodii
Ina adeer Hoeta Marxuumkaa yar ee da’da tar ee gardarrada lagu dillay illahay dembigiisa ha dhaafo. Mar 2alba hadduu dilja geystey iyo gaddii kalaba.
Waa saad u soo sheegtayoo wanka weyn marka la gawraco raffadkiisaa batta ina biixi raffadkiisa waa u jeeddaan kii ugu dambeeyey waxa uu ahaa wadaadadii iyo culimadii ugu tagtay shaikhii Sheekhaasheed ee dhulja laga qaaday kuwaasuu la socdey shaikh Cabdiraxnan Dheere oo ay hayb ahaan isu xigaan Ina biixi, oo isku deyey inuu u caqli celiye Candhuuf se ugu abaal guday, culimadiina intey CD adhootay ayey Habaar ku horgiseen oo xafiiskii uga baxeen. waaney sii mb arreeyeen. gaddey culimo dhaba yihiin saddexda gaadhi maayo. Ciidanada jiidda jooga ha innagag qaylinnina ee innoo daaya inteynu ammuurteenna adkeyneyno.
Waxa igu maqaala ah in reerka bahararsame ay diideen wax wada hadal ah, waana arin Amar Alle ku socotey
Talo waxaa iga ah in marka hore kuwan jaahiliinta ah ee halkan wax ku qora iyo kuwa la mid ah ee facebook iyo youtube fitmada ka wada ay ka waantoobaan soo qorida arintan iyo in laga sheekeeyo sawirkiisana layska daboolo oo laga saaro internetka. Hadii dadku faysal cali dhurwaa wada noqdo qaa nasiib darro iyo aakhiro seeg
Dhulbahantow hawlo badan baa idiin yaalla oo idin sugaaya, laba waxyaabood ka waantooba 1. Inaad isaaq dawlad ka dhogataan idiin kala qasaas qaada 2. Inaad fidno ka talisaan iyo isqaniin aan macna lahayn
Marxuumka faataxada haloo maro
Wale wiilka darti dhulbahantow wan idinka amin baxey inanan hiil idinka radinin tolinimana anan idin tirsan ban go,ansadey labo geriyod ba wiilkas ku dhacey nin rag ah o ku dhimasho mudan bu aha ninkaso kale wa lagu hagogta wa lagu yutu,aa farxan dhimaye ubadkisi yeysan idinku dayacmin
warka isaka daaya ooo ilahay kacsada ,oo kashaqeeyawanaaga